Ciidamada Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Ciidamada'
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maanta Xerada Tababarka Gen. Gordan Ku booqday ciidamo ka tirsan kuwa Xoogga dalka ee loo diyaarinayo howl-gallo ay Al shabaab uga xoraynayaan deegaannada ay weli gacanta ku hayaan ee dalka. Ra’iisul Wasaaraha oo ciidanka ugu tegay inuu ku dhiirageliyo shaqada ay qaranka u hayaan iyo in uu ogaado baahida …
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka General, Maxamed Axmed Jimcaale oo Maanta Gaaray Deegaanka Bariire (SAWIRRO)
Taliyaha koowaad ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed General, Maxamed Axmed Jimcaale (Cirfiid) ayaa maanta gaaray deegaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha hoose. General Cirfiid ayaa waxaa safarka ku wehlinaayay Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka , kuwaasi oo ka raacay Magaalada Muqdisho. Ujeedada socdaalka Taliyaha Xoogga uu ku tagay deegaanka Bariire ayaa la xiriira arrimo ku …
Mas’uuliyiin sare oo uu kamid yahay Ra’iisul Wasaaraha dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Guddoomiyaha gobolka Banaadir, Saraakiil iyo Siyaasiyiin ayaa maanta ka qeyb galay salaadda Janaasada ee lagu tukadey Marxuum Gen. Maxamed Sheekh Cismaan (Badmaceeye) oo dhowaan ku geeriyooday dalka Mareykanka. Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa …